We.com.mm - ရာသီဥတု အေးအေးလေးထဲမှာ ငါးမြေအိုးအရည်သောက်ဟင်းလေး ချက်စားကြရအောင်
အစားတလိုင်း ချစ်သူတွေ အတွက် အရသာရှိတဲ့ အရည်သောက်ဟင်းလေး တစ်မျိုးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ ဒါကတော့ ကြယ်ခေါင်ဒေသရဲ့ ဟင်းလျာကို အခြေခံပြီး ချက်ထားတဲ့ ဟင်းလေးပါပဲ။ ဒီတော့ ဘယ်လိုချက်ရမလည်းဆိုတာကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁. ငါး ( မိမိနှစ်သက်ရာ ငါးကို မိမိနှစ်သက်သလောက် အသုံးပြုလို့ ရပါတယ် )
၂. ပဲငံပြာရည် အနောက် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း )
၃. ပဲငံပြာရည်ကြည် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း )
၄. ငါးဖယ်ရိုး ( များများ )
၅. ကြက်သွန်ဖြူ ( ၆ တက် )
၆. ငရုပ်သီးစိမ်း (၇ တောင့် )
၇. နံနံပင် ( အနည်းငယ် )
၈. ချဉ်စော်ခါးသီးခြောက် ( ၂ ပြား )
၉. ချဉ်စော်ခါးသီးအစို ( ပါးပါးလှီးထားတာလေး အနည်းငယ် )
၁၀. ခရမ်းချဉ်သီး ( ၂ လုံး )
၁၁. ရှာကောပါကော အမှုန့် ( အစပ်နဲ့ ရောထားတာလေး အနည်းငယ် )
၁၂. ငရုပ်သီးခြောက် ( ၂ တောင့် )
၁၃. ပဲရွက် ( သို့မဟုတ်) ကန်စွန်းရွက် ( အနည်းငယ် )
၁၄. ဂျူးမြစ် ( အနည်းငယ် )
၁၅. သံပုရာသီး ( ၁ လုံး )
၁. အရင်ဦးဆုံး ငါးဖယ်ရိုးကို ဟင်းခတ်မှုန့်တွေနဲ့ နယ်ဖတ်ပြီး ဂျင်း၊ စပါးလင်တို့ထည့်ပြီး ဟင်းအရည်ရအောင် ပြုတ်ထားပါ။
၂. ငါးဖယ်ရိုး အရည်တွေ ဆူပွက်လာပြီဆိုရင် ငါးဖယ်ရိုးတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။
၃. ငါးအတုံးလေးတွေကိုတော့ ပဲငံပြာရည်အကြည် အနောက်တို့နဲ့ နယ်ဖတ်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်လောက် နယ်ဖတ်ထားပါ။
၄. ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီး နဲ့ နံနံပင်တို့ကို ညက်နေအောင် ထောင်းထားပါ။ ထောင်းပြီးပြီဆိုရင် ငါးဖယ်အရည်ပြုတ်အိုးထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် နယ်ထားတဲ့ ငါးအတုံးလေးတွေကိုပါ ထည့်ပြီး နောက်တစ်ခါပြန်ဆူအောင် ပြန်တည်ပါ။
၅. ဟင်းရည်တွေ ဆူလာပြီဆိုရင် အရသာအပေါ့အငန် မြည်းကြည့်ပြီး မိမိနှစ်သက်တဲ့ အရသာရပြီဆိုရင် ချဉ်စော်ခါးသီးအခြောက်၊ အစို၊ ပဲရွက်၊ ဂျူးမြစ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ရှာကောပါကော အမှုန့်တို့ကို ထည့်ပြီး မွှေလိုက်ပါ။
၆. ဟင်းရည်အရသာကလည်း အဆင်ပြေ၊ အရွက်တွေလည်း နူးပြီဆိုရင် သံပုရာရာ်လေးနဲ့ ငရုပ်ခြောက်တောင့်တို့ကို ထည့်ပြီး အိုးကို ချလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အရသာရှိတဲ့ ငါးမြေအိုး အရည်သောက် ဟင်းလေးကို ရရှိပါပြီနော်။
၀က်သားချိုချဉ်ကြော် လေး လုပ်စားမယ်
အာလူးဖျော်ရည်က အစာမကြေရောဂါကို လုံးဝပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
ဆေးလိပ်သောက်သူတိုင်း မဖြစ်မနေစားသုံးသင့်တဲ့ စူပါအစားအစာများ
မနက်စားမစားခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး(၄) မျိုး